सुक्खा खाना फ्रिज फस्टाउनुहोस् - सर्वश्रेष्ठ स्थिर सुकेका खाद्य फल फलाउन
थ्राइभ फ्रिज ड्राइड फूड भनेको के हो?
यी खानेकुराहरू केही दिनमा वा केही हप्तामा पनि खराब हुँदैनन्. तिनीहरू राम्रो छन्.
तिमी पग्लिनेछैनौ, घटाउने, वा काँचो मासु काट्ने.
र त्यहाँ स्वादको एक अतिरिक्त फट छ जुन तपाईंले अरू कतै फेला पार्नुहुनेछैन! एक चोटि मात्र लिनुहोस्!
जब तपाइँ तपाइँको दैनिक व्यञ्जनहरु मध्ये एक को लागी एक घटक को आवश्यकता छ, केवल THRIVE उत्पादन चयन गर्नुहोस् र यसलाई मिश्रणमा थप्नुहोस्- तपाईं ताजा सामग्री संग जस्तै. आफ्नो भान्सामा THRIVE राख्नु भनेको आफ्नै घरको बजार वा जस्तै हो घरको खाना पसल, तपाईको परिवारले मनपर्ने सबै खानासँग पूर्ण रूपमा भण्डार गरिएको. स्थानीय किराना पसलबाट हतार-हतार नगरी तपाईंले बचत गर्नुभएको समय तपाईंले रमाइलो गतिविधिहरू गर्न खर्च गर्न सक्ने बहुमूल्य समय हुनेछ।.
आज ThriveLife द्वारा थ्राइभ फ्रिज ड्राइ फूडहरू प्रयास गर्नुहोस्. तिनीहरू स्वादिष्ट र स्वस्थ छन्. यसले तपाईंले किन्ने तरिका परिवर्तन गर्नेछ, र खाना तयार गर्नुहोस्.
थप रंग, थप स्वाद, थप पोषक तत्व, थप WOW!
हामीले भर्खरै ताजाको लागि मात्र विश्व खोज्यौं, उच्चतम गुणस्तर सामग्री. थ्राइभ लाइफ फूडहरूमा कुनै MSG हुँदैन र व्यक्तिगत रूपमा कडा मापदण्डहरूको आधारमा चयन गरिएको हो. खेत देखि आफ्नो घर सम्म, हामी व्यक्तिगत रूपमा सम्पूर्ण THRIVE विकास प्रक्रियाको निरीक्षण गर्छौं ताकि तपाईंले उपलब्ध उत्कृष्ट खाद्य भण्डारण उत्पादनहरू प्राप्त गरिरहनुभएको छ भनी थाहा पाउँदा मनमा शान्ति पाउन सक्नुहुन्छ।.
किनभने THRIVE दैनिक मेनु योजनाको लागि विकसित गरिएको थियो, हामीले यसलाई हाम्रो मिशन बनाएका छौं तपाईले खाइरहनुभएको खानाहरू राम्रो स्वादको सुनिश्चित गर्न! अन्य खाद्य भण्डारण उत्पादनहरू विपरीत जुन लुकाइन्छ र कहिल्यै प्रयोग हुँदैन, thrive खाद्य भण्डारण उत्पादनहरू तिनीहरूको ताजापन र उत्कृष्ट स्वाद प्रमाणित गर्न समय र समय परीक्षण गरिएको छ. THRIVE खानाको साथ, उत्कृष्ट स्वाद मानक हो - अपवाद होइन.
कम प्रति सेवा लागत संग, THRIVE फूडहरू पैसा बचत गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो जबकि तपाईंको परिवारले उनीहरूले योग्य खाद्य विविधता र पोषण प्राप्त गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ।. फलफूल खाना = उत्तम मूल्य!
बनाउन सजिलो रेसिपीहरू THRIVE को प्रत्येक क्यानमा समावेश गरिएको छ त्यसैले तपाईंले किन्नु भएको thrive खाना भण्डारण कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सोच्न छोड्नुहुने छैन।. किनभने हामी तपाईंको परिवारले सम्भव भएसम्म उत्तम स्वाद र पोषणको आनन्द लिन चाहन्छौं, हाम्रा सबै रेसिपीहरू THRIVE उत्पादनहरूका लागि विशेष रूपमा विकसित गरिएका छन्.
हाम्रो रङ कोडेड क्यानहरूले तपाइँको खानालाई सहज रूपमा व्यवस्थित राख्दछ जबकि तपाइँको आहारमा सन्तुलन र विविधताको उचित मात्रा समावेश गर्दछ।. हाम्रो खाना रोटेशन प्रणाली संग संयोजन मा प्रयोग गर्दा, THRIVE खानाहरू निरन्तर घुमाइन्छ, तपाईंको परिवारले सकेसम्म ताजा खाना प्राप्त गर्ने ग्यारेन्टी गर्दै.
मासु र बीन्स
THRIVE बाट नयाँ RUVI पेयहरू
फलफूल र तरकारी अरु केहि छैन. थप सिक
Thrive Life लाई सजिलो बनाएको छ (र स्वादिष्ट) हाम्रो फ्रिज सुकेको पाउडर संग आफ्नो फलफूल र तरकारी प्राप्त गर्न. रुवी सम्पूर्ण फलफूल र तरकारी हो, ती सबै स्वस्थ फाइबर सहित र अरू केही छैन, तिनीहरूको चरम पोषणमा उठाइयो र ती पोषक तत्वहरू र ती सबै स्वादहरूमा लक गर्न सुकाइयो!
प्रत्येक थैलीमा स्ट्रेट-अप पूरै फ्रिजमा सुख्खा फलफूल र तरकारीहरूको 4x सर्भर हुन्छ. अरु केही छैन.
के तपाईलाई थाहा छ हामी बेच्छौं:
सुकेको कुखुरा फ्रिज गर्नुहोस्
सुकेको मासु फ्रिज गर्नुहोस्
सुकेको मासुको टुक्रा फ्रिज गर्नुहोस्
सिजन गरिएको चिकन स्लाइसहरू
सुकेको पोर्क फ्रिज गर्नुहोस्
सुकेको कालो सिमी फ्रिज गर्नुहोस्
सुकेको अण्डा फ्रिज गर्नुहोस्
सुकेको फ्रिज सेम फ्रिज गर्नुहोस्
सुकेको रातो बीन्स तत्काल फ्रीज गर्नुहोस्
दुग्ध, फलहरु, र तरकारी
सुकेको खट्टा क्रीम फ्रिज गर्नुहोस्
सुकेको parmesan पनीर स्थिर
मोन्टेरी ज्याक चीज टुक्रा
सुकेको स्ट्रबेरी दहीको टोकाइलाई फ्रिज गर्नुहोस्
सुकेको बटरनट स्क्वाश फ्रिज गर्नुहोस्
सुकेको हरियो प्याज फ्रिज गर्नुहोस्
सुकेको स्याउ स्लाइसहरू स्थिर गर्नुहोस्
सुकेको फुजी स्याउ फ्रिज गर्नुहोस्
सुकेको दादी स्मिथ स्याउ
सुकेको मिर्च फ्रिज गर्नुहोस्
हामी उत्कृष्ट स्न्याकीहरू पनि बेच्छौं 🙂
आफ्नो प्राप्त गर्नुहोस् खाजा! हाम्रो नबिर्सनुहोस् खाद्य भण्डारण फस्टाउनुहोस् प्रणाली
थ्राइभ लाइफ फूडहरूको लागि उत्तम मूल्यहरू
थ्राइभ फ्रिज ड्राइड फूड टुडेबाट अर्डर गर्नुहोस्!
THRIVE लाइफ फ्रिज ड्राइ फूड उत्पादन लाइन फलफूल समावेश गर्दछ, तरकारीहरु, मासु, सिमी, अन्न, डेयरी, र स्वस्थ पेय र खाना पनि, अण्डा वा दूध जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरू सकिएपछि प्रत्येक पटक तपाईंलाई किराना पसलको यात्रा बचत गर्दै.
थ्राइभ फ्रिज ड्राइ फूडहरू यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिकामा उत्पादन गरिन्छ र थ्रिभ लाइफद्वारा प्याकेज गरिन्छ. THRIVE खाद्य पदार्थहरूको अद्भुत शेल्फ लाइफ हुन्छ जुन रहन्छ 5-25 वर्ष, यसलाई एक महान आपतकालीन खाना वा बाँच्नको खाना बनाउन. यी फ्रिजमा सुकेका खानेकुराहरू बिग्रने चिन्ता नगरी तपाईंको आफ्नै भान्छा वा पेन्ट्रीमा लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ।. यो बढ्दो अर्थतन्त्र वा मन्दीको समयमा पैसा बचत गर्ने उत्तम तरिका हो. फ्ल्यास फ्रिजिङ प्रविधि प्रयोग गर्दै, फलफूल खानेकुराहरू राख्छन् 99% पोषक तत्वहरूको, रंगहरू, र बनावट. र हाम्रो थ्रिभ फ्रिज ड्राइ फूड उत्पादनहरूको स्वाद पनि अचम्मको हुन्छ! खाद्य आपूर्ति अवरोध हुँदा दीर्घकालीन भण्डारण र दिन-प्रतिदिन प्रयोगको लागि उपयुक्त.
तानिएको पोर्क शेफ प्याक
ग्राउन्ड बीफ शेफ प्याक
शेफको छनोट- स्पाइस क्यान